Thanh trà | Cây cảnh - Hoa cảnh - Bonsai - Hòn non bộ - Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Thanh trà | Cây cảnh – Hoa cảnh – Bonsai – Hòn non bộ – Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Umthi we-Thanh Tra unegama lesayensi i-Bouea gandaria Blume okanye i-Bouea macrophylla Griff., yeyosapho lwe-Anacardiaceae, i-odolo ye-Sapindales igama lesiNgesi nguMarian plum, iGandaria, i-Marian mango okanye i-Plum mango, ngumthi weziqhamo ovela kwingingqi yaseMpuma. UMzantsi Asia.
Iti eluhlaza luhlobo lomthi, eVietnam, alukho kakhulu kwisithili sesiqithi sasePhu Quoc (Kien Giang) kunye nommandla wentaba yaseSam (Chau Doc, An Giang). Ukususela kwi-1970 ukuya kuthi ga ngoku, esi sityalo siye sahamba kwaye sakhula ngamandla e-Vinh Long (ukusuka kwi-Dong Hung hamlet ukuya kwi-Dong Hoa kunye ne-My Hoa, i-Dong Thanh commune, isithili saseBinh Minh).
Isiqhamo seti eluhlaza
Iti eluhlaza Kukho iindidi ezimbini:
– Imthubi emnyama, iqokobhe eliqinileyo, elikrunchy, incasa eswiti nemuncu nencasa yeacrid.
– Umbala otyheli okhanyayo, ulusu oluthambileyo, incasa emuncu kunye ne-acrid.
Kukho iindlela ezininzi zokusebenzisa: idla ngokuthe ngqo; imiqadi enamatye neendlela; ifakwe isiraphu yeswekile (njenge-strawberry); i-pickled (njengendlela yokwenza i-lemon enetyuwa), yenza imifuno edibeneyo.
Ngaphambi kokuzonwabisa Thanh Tra, abantu kufuneka bacudise okanye bahlikihle izandla zabo ukwenza ulusu lube lula ukuze kube lula ukuxobuka. Ngeziqhamo ezimuncu, emva kokutyunyuzwa kude kube lula, ungazicwilisa ngetyuwa kunye nepepper, kwaye udle izikhumba. Oku kuchukumisa ngakumbi kunokutya isiqhamo esixotshiweyo kuba xa sihlafuna ixolo lentonga, kusenza sibe neemvakalelo ezibangel’ umdla ezingenakuchazwa, ezinamaqhuma nezithambileyo nezimuncu.
Ukanti, incasa yasendle ingena ezingcanjini zamazinyo, ixutywe nencasa enetyuwa yetyuwa egayiweyo, kunye nencasa ebukhali yepepile yetshilisi kwincam yolwimi.
Ukuba ufuna ukuba neglasi yesiselo, ngoko emva kokutyumza isiqhamo ukuze uthambe, faka isiqhamo kwiglasi kunye netyuwa encinci kunye nesixa seswekile emhlophe. Sebenzisa icephe ukuxuba isiqhamo namanzi, ityuwa, neswekile, uze ugalele intwana yamanzi abandayo, uxovule kakuhle. Umkhenkce ochetyiweyo okanye umkhenkce ocoliweyo eglasini sisiselo esimnandi kwilanga lasemini.
Phawula: abantu abasoloko benorhudo, isisu esibuthathaka, okanye ilindle elixengaxengayo, abantu abaneentlungu zesisu, izilonda zesisu akufuneki basitye esi siqhamo.
Phawula: Iti eluhlaza yendawo I-Mekong Delta ihlukile kwi I-Hue’s Thanh Tra, kuba i-Hue land stick luhlobo lwepomelo. Umthi weti waseMazantsi sisiqhamo esinembewu enkulu enolusu olutyheli. Xa ixesha lemvula lifikelela esiphelweni, imithi yeti izele ngamanzi kwaye iqalisa ukuntshula kwii-axils zegqabi ngalinye. Kwiinyanga ezintathu emva kokubamba imimoya enamandla kunye nelanga elimnandi lasezantsi, ngeentsuku zoNyaka oMtsha waseLunar, amajikijolo eti eluhlaza avuthwa ngokuthe ngcembe emasebeni. Ukujonga nje iziqhamo ezimthubi eziqaqambileyo, njengemango encinci, sele ithandeka emehlweni, singasathethi ke le nkangeleko ikwanceda ukugxotha ukukhanya kwelanga okurhabaxa okusenza sinxanwe kwaye somise imiqala yethu. Xa unandipha isiqhamo, siya sinamathela ngakumbi nangakumbi.
I-Thanh Tra e-Hue luhlobo lwepomelo
Iti eluhlaza Imbewu ingatyalwa, kodwa kuthatha iminyaka eyi-10 ukuba umthi uthwale isiqhamo, kwaye ukuba utyalwe ngokusikwa, emva kweminyaka emi-3-5, umthi uya kuqalisa ukuvelisa iziqhamo kwaye ufuna ukuba neziqhamo ezininzi, umthi kufuneka ube nesiqhamo. ubomi beminyaka engama-20-50. . Umdala umthi, kokukhona iziqhamo ezininzi. Umthi we-barberry oneminyaka engama-50 ubudala, unyaka ngamnye, unika isiqhamo malunga ne-500-700 kg.
EThailand, isiqhamo seThanh Tra sithandwa kakhulu ngabathengi.Ummandla otyalwe eThanh Tra eThailand unyuke ngokukhawuleza ukusukela ngo-1998. Ngo-2001, urhulumente waseThailand waqala ukukhuthaza ukuthunyelwa kwesi siqhamo kumazwe angaphandle. Okwangoku, iibha zeti zaseThai zithunyelwa kumazwe amaninzi aseYurophu kwaye zithengiswa kwiivenkile ezinkulu zase-UK.
I-Thanh Tra tree kulula ukuyikhulisa, ayichaphazeli izitshabalalisi kunye nezifo, ikwazi ukumelana nembalela, iintlobo zorhwebo zebarberry eziphuma eThailand nase-US ubukhulu becala zinemilo yeziqhamo ezinde, incasa emnandi, kunye nenyama yesiqhamo esinesondlo. Umbala kunye noyilo lwesiqhamo intle, ngoko ke inomtsalane kakhulu kubathengi. Kwilizwe lethu, ixesha lokuvuna le-Thanh Tra isiqhamo lingaphambili kunezinye iziqhamo ezininzi, ngoko ke isiqhamo kulula ukuthengisa ngexabiso eliphezulu.
Iintyatyambo ze-Thanh Tra ziphindwe kabini malunga nenyanga enye, ixesha lokuvuna iziqhamo lihlala phakathi kuDisemba ukuya kuFebruwari kwikhalenda yenyanga. Ngokutsho kombhali (Chairuangyod, 1996), umthi weti sisiqhamo esinamandla amaninzi kwixesha elizayo kwaye sesinye seziqhamo ezisa owona mvuzo uphakamileyo kubalimi eThailand.
Amasetyana, amagqabi kunye namaqunube
Ubuchwephesha bokukhulisa ibarberry
– Umhlaba: I-Thanh Tra inokuguquguquka okubanzi, ngoko inokukhuliswa kwiindidi ezininzi zomhlaba ezinje: umhlaba obomvu we-basalt, umhlaba oyisanti, umhlaba oyisanti, umhlaba we-alluvial kwi-Mekong Delta, njl.
– Umgama wokutyala: Umgama ofanelekileyo wokutyala kumhlaba onokuchuma okuphantsi ngu: 7m x 7m (200 izityalo/ha), 8m x 8m (156 izityalo/ha) Kumhlaba ochumileyo otyalwe kwindawo egqagqeneyo ngaphezu kwe-9m x 9m (123 imithi). /ha).
– Lungiselela imingxuma yokutyala: Yomba imingxuma yokutyala i-50x50x50 cm, xa ugrumba imingxuma kufuneka yahlule umaleko ophezulu womhlaba ukuya kwelinye icala kunye nomhlaba ophantsi ukuya kwelinye icala, faka umngxuma ngamnye nge-10-12 kg yomgquba ovundiweyo, 150 – 250 g Superphosphate, xuba kakuhle nomhlaba ongaphezulu ojikelezileyo, galela i-50 g yeBasudin 10H kunye ne-0.5 kg yekalika ukunqanda iintubi nokuphucula ipH yomhlaba. Ukongeza kwizinto ezichazwe ngasentla, akufanele usebenzise isichumisi se-organic esingahlanjululwanga okanye umlotha wekhitshi njenge-primer, enokubangela ukuba kube lula ukubola kweengcambu kunye netyuwa yomhlaba.
Ukutyala: Sebenzisa isandla sakho ukwenza umngxuma omncinci embindini womngxuma wokutyala, malunga ne-2-3 cm ubunzulu kunomphakamo webhegi yeti, mkhulu kancinci kunembiza, yishiye ingxowa phantsi, sebenzisa imela ebukhali. ujikeleze ingxowa yeplastiki, 2-3 cm ukusuka ezantsi, uxobule umphantsi wengxowa. Hlola iingcambu, unqumle zonke ii-taproots kunye ne-rootlets ukusuka kumhlaba wokubumba, uze ubeke kwindawo yokutyala, ugubungele ngomhlaba kwaye ususe i-plastic wrap. Sebenzisa izandla zakho ukugquma kwaye ucinezele umaleko womhlaba ojikelezileyo ukulungisa ingcambu yezithole ngaphandle kokushukunyiswa ngumoya, nikela ingqalelo yokubeka umthi kwindawo yokutyala ukuze emva kokutyala intamo yengcambu ilingane nomhlaba ojikelezileyo, ungatyali. i-negative okanye igqume isiqu. Emva kokutyala, kuyimfuneko ukwenza ibhafu enobubanzi obuyi-1 m ukwenzela ukuba amanzi okunkcenkceshela angaphumi. Emva kokutyala, thatha isibonda, ubophe isiqu somthi kwisibonda ukunqanda ukuba umoya ungashukumisi ingcambu, ngoko uyibophe ngokukhululekileyo ngentambo yenayiloni. Ukuba ityalwe ngexesha lemvula. Thanh Tra akukho mfuneko yokuba nomthunzi durian intle Mangosteen.
– Ukunkcenkceshela: Ukunkcenkceshela kwangoko emva kokutyala, ukutyala ekuqaleni okanye phakathi kwexesha lemvula kuya kunceda ukunciphisa umsebenzi wokunkcenkceshela. Ukuba ukutyala ngexesha elomileyo kufuneka kunkcenkceshelwe ubuncinane kwinyanga yokuqala, kufuneka kunkcenkceshelwe nge-sprinkler enomlinganiselo owaneleyo wamanzi.
-Amasebe okuthena: Thanh Tra ngumthi oneziqu ezininzi, amasebe omthi ngokwawo ngokulinganayo, ngoko ke ukuthena kunye nokwenza i-canopy ngexesha lokwakha kulula kuneminye imithi. Ngamaxesha athile emva kweenyanga ezi-2-3, sebenzisa isikere ukucheba amasebe ashinyeneyo, unike umthi i-canopy elungeleleneyo. Xa umthi unike isiqhamo emva kwexesha lokuvuna, ukuthena indawo apho ukuxinana kwamasebe kukhula khona, ukudala i-canopy ecacileyo, umthi uya kunika isivuno esiphezulu kwisityalo esilandelayo.
– Ukuchumisa: Rhoqo ngonyaka ekuqaleni kwexesha lemvula, galela i-15-25 kg yomgquba/ingcambu ezaphukileyo ngonyaka ngamnye ekuqaleni kwexesha lemvula, ngenjongo yokongeza izakha mzimba, i-humus, ukwandisa ukuchuma nokwandisa ukugcinwa kwayo. umthamo womhlaba ngexesha lonyaka womisiwe. Chuba ngokusasaza ngokulinganayo emhlabeni ujikeleze phezulu ebhafini.
– Unyaka woku-1: Emva kokutyala iintsuku ezingama-20, galela i-NPK(15-15-15) okanye i-NPK(16-16-8) 100-150g/ingcambu, chumisa ngokusasaza ngokulinganayo kumhlaba ojikeleze i-canopy, udala iimeko ezifanelekileyo. iingcambu ukufunxa izondlo ngeyona ndlela isebenzayo, emva kokuchumisa, sebenzisa iraki ukurhuqa kancinane umhlaba ukwenza isichumiso singene lula, uze ugqume ngomaleko obhityileyo womhlaba. Kunokwenzeka ukuhlambulula isichumisi ngamanzi okunkcenkceshela, ukusebenza kakuhle kuya kuba phezulu. Emva koko rhoqo emva kweenyanga ezi-3-4, faka isichumiso kube kanye, ixesha ngalinye i-100-200g/ingcambu, idityaniswe nokutshiza ngaphezulu kwesichumiso samagqabi ukongeza izondlo kwizityalo.
– Kunyaka wesibini: Sebenzisa isichumiso se-NPK kwidosi ye-0.5-1 kg, yahlulwe yangamaxesha ama-2 wokufaka (ekuqaleni nasekupheleni kwexesha lemvula).
– Kunyaka wesi-3 nowesine: umthi uqalisa ukuthwala isiqhamo, galela ingcambu nganye 1.5 – 3 kg yahlulwe izihlandlo ezi-3: ixesha eli-1 emva kokuvuna, okwesibini phambi kokudubula, okwesibini kungaxutywa ngaphezulu kwe-0.5 kg ye-phosphate edibeneyo isichumisi sokongeza i-phosphorus, i-calcium, i-magnesium kunye nenani lezinye izinto ezilandelwayo kwizityalo, okwesithathu kusetyenziswe inyanga eyi-1 emva kweeseti zeziqhamo. Xa imithi yeziqhamo izinzile, galela i-3-4 kg ye-NPK ngonyaka, kunye ne-0.5-1 kg yesichumiso se-potassium (K2SO4) kwingcambu nganye, kwaye galela isichumiso se-potassium sulphate malunga neentsuku ezingama-20 phambi kokuvuna ngokusasaza intloko phezu komhlaba. Ukunkcenkceshela amaxesha angama-2-3 ukungena nzulu kuya kwandisa kakhulu ubumnandi kunye nombala wenyama yesiqhamo.
Umthi intonga yeti ehlanganisiweyo iziqhamo emva kweminyaka emi-3-4 yokutyala, imithi ≥ iminyaka eyi-7 ubudala ivelisa i-120-200 kg / umthi. Khohlo Thanh Tra Xa sele ivuthiwe, ingaphila emthini kangangeentsuku eziyi 12-15. Sebenzisa izixhobo zeleli, isikere ukusika iziqhamo kunye neengxowa zomnatha ukuze uvune iziqhamo, nciphisa ukukhwela emithini kuba kulula ukolula nokophula amasebe okuya kuchaphazela isivuno sesityalo esilandelayo. Xa usika iziqhamo, kufuneka ushiye i-1-3 amaqabunga kwi-stalk ekhohlo, isiqhamo siya kuhlala sisitsha ixesha elide kwaye kulula ukuthengisa. Emva kokuvuna, iziqhamo kufuneka zihlulwe ngobukhulu obufanayo kunye nokuvuthwa. Emva kokuhlelwa, isiqhamo sifakwe kwiibhokisi ze-foam, ibhokisi ngalinye li-20-25 kg ukuhambisa kubathengi kunye nee-arhente zokusetyenziswa.
Umthi weti eluhlaza